पाँचखाल समृद्धिका लागि ‘कञ्चन सपना’ – Nepal Press
२०७९ वैशाख २६ गते १३:४६
स्वाभाविकरुपमा यतिखेर अन्य स्थानीय तहमा जस्तै पाँचखाल नगरपालिका पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । कृषि र पर्यटनको प्रशस्तै सम्भावना भएको पाँचखालको समृद्धि कसले जितेमा हासिल गर्न सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
त्यसैक्रममा मेयर पदमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मैदानमा छन्, कन्चन अधिकारी । आफ्नो सशक्त टीमसहित प्रतिस्पर्धामा आएका अधिकारीको मूल मर्म छ– यसै माटोमा जन्मेर, हुर्केर यहीं माटोका लागि केही गर्न खोज्ने लोभ, लालच र कपटविनाको नेतृत्व ।
स्पष्ट, निष्कलंक, यहीं भूमीमा हुर्केका कारण भूगोल, जनचाहना सबै बुझेको, विकासको दृष्टिकोण भएको समूह खोजिरहेको पाँचखालमा कञ्चनको टीम मात्र एक त्यस्तो समूह भएको विभिन्न उदाहरणबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
विद्यार्थी, युवा राजनीति, पत्रकारिता जस्ता अनुभव अब आफ्नै भूमिमा पस्कदैँ समृद्धिको सपना पूरा गर्ने बाटोमा कञ्चन अग्रसर देखिन्छन् । जसकारण युवाहरुमा थप जाँगर पलाएको देख्न सकिन्छ ।
यसै क्षेत्रका संघीय सांसद गोकुल बास्कोटाले पाँचखालको विकासको निम्ति साना–ठूला सबै योजनाका लागि प्रशस्त बजेट पार्न सफल भएका थिए । जस्तै– मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, सवा दुई अर्बको खानेपानी योजना, स्मार्ट सिटी, भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङ मार्गलगायत ।
बाटोघाटो निर्माणमा पनि पाँचखाल नमूना बनेको छ, जुन कुरा हामी भूगोलमा स्पष्ट देख्न सक्छौँ । तर बिडम्बना पाँचखालका निर्वमान मेयरले ती काम आफूले गरेको भन्दै क्रेडिट लिने गरेका छन् । तर कामको नाममा सिन्को नभाँचेको गुनासो आमजनताको छ ।
त्यसैले त पाँचखालबासी भन्छन्, ‘हामीलाई कालो चस्मा लगाएर काठमाडौंबाट कहिलेकाहीँ आउने अनि आश्वासन र गफको खेती गर्ने ‘पर्यटक’ मेयर होइन, यहीँ बसेर हाम्रा दुःख सुख बुझ्ने र पाँचखालको साँच्चै चिन्ता गर्ने मेयर चाहिन्छ । र त्यो गर्न सक्ने क्षमता कञ्चनको टीमसंग छ ।’
उनीहरु भन्छन्, ‘गोकुल बास्कोटाले मन्त्री हुँदा पनि र नहुँदा पनि समग्र जिल्लासहित पाँचखालमा पनि प्रशस्तै बजेट ल्याएर धेरै काम गर्न खोजे । तर क्रेडिट लिने पूर्वमेयर भए । त्यसमाथि पनि सरकार परिर्वतनसंगै धेरै योजनाहरु अधुरा रहे ।
हो, तिनै अधुरा सपना पूरा गर्न र पाँचखाललाई देशकै नमूना नगर बनाउन हामीलाई सशक्त समूह चाहिन्छ । जसले विकास पाँचखाल र पाँचखालबासीको लागि गरोस्, फेसबुकका लागि हैन । बास्कोटाले प्रदेश र संघबाट बजेट पठाउने तर त्यहीं बजेटले खन्दै गरेको डोजरमाथि बसेर उल्टै बास्कोटालाई गाली गर्ने चटकी मेयर अब हामीलाई काम छैन ।’
तीन हजारलाई रोजगारी दिन्छु भनेर चुनावको समयमा पूर्वमेयरले दिएको आश्वासन पनि गफैमा सीमित भयो । सोझा जनतालाई भ्रममा राख्न सिपालु उनको आफ्नै समूहका व्यक्तिहरु भित्रभित्रै निकै असन्तुष्ट रहेको पाइन्छ । साथै पाँचखालबाट इँट्टाभट्टा हटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त कुरै छोडौँ, अप्रत्यक्षरुपमा थप मलजल गर्न सहयोग गरेका कारण जनताको स्वास्थ्यमा उनी कति बेपरबाह छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
सबै अध्ययनपछि एउटा प्रश्न उब्जियो, कञ्चनको समूहलाई भोट किन ?
– पाँचखालको विकास फेसबुक र टिभीमा हैन, पाँचखालमा नै गर्न ।
– कृषि, पर्यटनलगायतमा फड्को मारेर स्वरोजगारीको सिजैना गर्न ।
– चौविसै घण्टा उपलब्ध हुने नेतृत्व पाउन ।
– ‘कुरा ज्यादा, काम शून्य’ प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै ‘कुरा कम र काम ज्यादा’ गर्ने संस्कार बनाउन ।
– अधुरा रहेका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न ।
– विकासका नयाँ–नयाँ मोडेल भित्र्याउन ।
– व्यवसायका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण, बिउ, आलु भण्डारमा अनुदान, सांस्कृतिकक संग्राहालय निर्माण, बस्ती विकास योजना, रिबन सिटी, सामुदायिक आवासलगायतका सिर्जनात्मक अभियान सफल बनाउन ।
– समग्रमा पाँचखाललाई देशकै नमूना नगर बनाउन ।
प्रकाशित: २०७९ वैशाख २६ गते १३:४६